/blog/gallery/7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Bromantane
Ihe na 09 / 15 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ihe niile banyere Bromantane ntụ ntụ
1.Chemical properties nke Bromantane
2.Bromantane General nkọwa
3. Bromantane ntụ ntụ Jiri
4.Bromantane ntụ ntụ Mechanism of action
5. Bromantane ntụ ntụ
Bromantane ntụ ntụ bụ ihe na-akpali akpali na ihe ndị na-echegbu onwe ha na Russia na njedebe nke 80 nke na-emekarị site na-egbochi reuptake nke dopamine na serotonin n'ime ụbụrụ, ọ bụ ezie na ọ nwere mmetụta cholinergic na akwa doses. Ihe nchoputa nke ihe omumu ahu choputara na nchikota nke psychostimulant na nchegbu nchegbu di irè iji me ihe ngosi nke igwe. Ọ na-akwado arụmọrụ nke uru ahụ ma jiri ya mee ihe dịka psychostimulant na ọgụ na-edozi ahụ.
N'oge gara aga, a na-eji ya na doping, na Atlanta Olympic na 1996, ọtụtụ ndị gosipụtara ezi nzaghachi na ule ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a machibidoro ya iwu iji mee ka ọ bụrụ onye na-akpali akpali na onye na-ahụ maka ihe nhịahụ, a kọwapụtara ya dịka ihe na-akpali akpali na ndepụta nke ihe ndị a machibidoro iwu nke ụwa. A na-eji nlezianya eme nnyocha banyere ọgwụ ndị a na-emepụta, a na-amarakwa ọtụtụ ọgwụgwọ, ma nchọpụta banyere bromanthan bụ nke kachasị elu. Nnwale ụmụ mmadụ, dị ka mmụba nke ndidi na ọnọdụ dị oke njọ, anọgidewokwa na-aga n'ihu.
Nnyocha egosiwo na nchikota nke mmetụta ọgwụ bromanthan na-akpali akpali ma na-echegbu onwe ya na-eme ka ọ dị irè n'ịgwọ asthenia ma e jiri ya tụnyere placebo
1. Chemical Njirimara nke Bromantane
CAS No .:87913-26-6
Ụdị ọgụgụ isi: C16H20BrN
MOL Njikwa: 87913-26-6.mol
Onu ogugu oke: 306.24
Bromantan bụ ụghalaahia nke Ladasten, nke a makwaara na Russia dị ka adamantyl bromide phenylamine.
Ngwa: okwu ọnụ (mbadamba)
Ọkara ndụ ndụ: 11.21 awa (n'ime mmadụ)
Oge 7 (na oke)
Bromantan bụ naanị nootrop, 50-100mg dosage maka mmetụ ìhè, ọnọdụ dị mma, ìhè ìhè, mma na-elekwasị anya, na ibu (150-250mg +, dabere na ahụmahụ anyị nwere na stims) enwere ọkụ ọkụ, ọ bụghị ihe anụ ahụ.
Bromantan bụ ihe na-akpali akpali nke na-enyere aka melite egwuregwu. Egwuregwu Olympic nke 26 nke dị na 1996In Atlanta, USA, na-atụle ihe ndị na-agba egwu na mba ụwa, IOC mere nkwadebe zuru ezu tupu ememme Olympic, gụnyere ọkachamara nke ndị ọkachamara n'edu ọgwụ ọjọọ sitere na United States na Germany na ịzụta ụlọ ọrụ nyocha.
Eji ọgwụ a eme ihe; na mgbakwunye, o tinyeghị na ndepụta IOC amachibidoro iwu. Kolesov kwusiri ike na ha degaara Kọmitii Ahụike IOC afọ abụọ gara aga iji jụọ ma Bromantan bụ ọgwụ a machibidoro iwu, ma a zabeghị ya, n'ihi ya, a na-ewere ya dịka nchekwa.
Ndị isi nke Kọmitii Na-ahụ Maka Kọmitii Na-ahụ Maka Ogwuregwu Olympic nke Mba Nile kwetaghị ihe ahụ merenụ ma weere ọgwụ ahụ ka ọ bụrụ ngwakọta nke steroid na ọtụtụ ndị ọzọ na-enye ọgwụ na ndị na-ekpuchi ọgwụ, ma e nwere ndokwa ka ukwuu na ndepụta IOC nke ọgwụ ọjọọ amachibidoro, 'arụmọrụ nwere ike ịre dịka ọgwụ ọjọọ. Ha abụọ nwere echiche ha.
3.Bromantane ntụ ntụ Jiri
Ndị ọgwụ ndị a nwere ọtụtụ ihe ndị dị ndụ, karịsịa ndị na-akpali akpali ma na-echegbu onwe ha, ihe bụ isi na-emepụta ọgwụ na-akpali akpali na usoro nhụjuanya nke bụ isi, nke na-egosipụta onwe ya n'ịba ụba nke anụ ahụ na nke uche, na-egbochi mmepe nke ike ọgwụgwụ ma na-emewanye mgbake mgbe nrụgide anụ ahụ na uche.
A pụrụ ime usoro iwu ọgwụ ike na ike ọgwụgwụ:
• onye na-enwe mmetụta uche na-akpali akpali (na-agwụ ike na-emekarị ike);
• ogige ndị na-emepụta ume (ihe kachasị emetụta bụ n'oge nlekọta);
• ndị na-achịkwa nke metabolism (ihe ndị na-edozi ma ọ bụ gbochie ụzọ ụzọ metabolic).
A na-ezo aka na-emepụta ọgwụ ndị na-emetụta ọgwụ ndị na-emeghị ihe na-adịghị mma, nke nwekwara ike ịnwe, ka ọ dịkwuo ogo ma ọ bụ karịa, ọrụ antihypoxic. Ọgwụ ọjọọ dị iche na antihypoxants n'ihi na ha na-akpali akpali njikọ nke ndị na-edozi ma na-amụba arụmọrụ ha. Na mgbakwunye, ha nwere mmetụta antihypoxic n'ọnọdụ ọnọdụ hypoxic, nke na-emepụta site na ike nke mitochondria iji belata ihe na-eme ka ọ ghara ịdị na-arụsi ọrụ ike, ọ bụghị n'okpuru ọnọdụ hypoxic nke usoro ọdịnala ndị ọzọ.
5.Bromantane ntụ ntụ
Mgbe a na-eji ọnụ ekwu okwu, ọgwụ ahụ na-ebu ngwa ngwa, mana eriri afọ ahụ adịghị etinye ya kpamkpam n'ime ọbara (bioavailability bụ 42%), ngwa ngwa na nnukwu nha na-ekesa na akụkụ na anụ ahụ, mana eji nwayọọ nwayọọ wepụ ya n'ahụ. E debere na anụ ahụ dị mma. Ọnụ ọgụgụ nke absorption nke bromantane site na akụkụ eriri afọ na ụmụ nwanyị dị elu karịa, nkeji, ndụ ọkara dị mkpụmkpụ karịa nke ụmụ nwoke. Oge iji ruo n'ogo kachasị nke bromantane n'ime ọbara n'ọtụtụ ndị inyom na-egosi 2.75 awa, na ụmụ nwoke - 4 awa. A na-etinye ọgwụ na mjuju n'ime imeju, na nbibi ya na-emekarị site na ụzọ ntụgharị.
Ihe omuma amino adam adam na - bromantane, nke jikọtara stimulatory na mmetụta nchegbu, na-emewanye nke anụ ahụ na nke uche, na-ebelata mmepe nke nrụrụ ike, na-eme ka nkwụghachi dị na ọnọdụ hypoxia na hyperthermia nkịtị na mgbagwoju anya, meziwanye usoro mne, ọzụzụ; eme ka mmekorita nke mmeghari, na-eme ka ọnọdụ ahụ dị elu, nwere mmechi neuropsychoaktiviruyuschim (ya mere a na-akpọ ya mgbe ọ bụ psychomotor stimulants), na-egosi antagonism maka ntụgharị ụda mmetụta nke tranquilizers, mmetụta dị mma na-enweghị mmetụta na-emetụtaghị ọrụ chronotropic nke obi na usoro ọbara mgbali elu, nwere ọrụ na-enweghị isi.
E guzobere mmetụta dị mma nke bromantane na njedebe nke ọnọdụ psychophysiological - olu na nkwụsi ike nke uche, mgbagha mgbagwoju anya, akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke onye ọrụ. Usoro usoro nke bromantane na-adabere n'ikike ịmekwu ọrụ nke ebe a na-ahụ anya nke usoro nhụjuanya nke etiti (ụbụrụ nke hypothalamus, ihe ntanetị nke taya, hippocampus). Ọgwụ ọjọọ enweghi mmetụta ọ bụla na ndị nkatọ noradrenergic, ma ha ghọtara ihe ndị ahụ na-emegharị site na usoro dopaminergic. A na-atụ arokwa na a ga-enwe mmetụta nke etiti serotonin. A na-arụ ọrụ ụfọdụ n'ime mmezu nke ọrụ mmepụta ihe nke bromantane site na njirimara ihe nchebe ya na nke anụ ahụ. A na-emezi mmetụta nchebe nke bromantane mgbe eji ya na bemitil.
Ọgwụ ọjọọ enweghi mmetụta ọ bụla na ndị nkatọ noradrenergic, ma ha ghọtara ihe ndị ahụ na-emegharị site na usoro dopaminergic. A na-atụ arokwa na a ga-enwe mmetụta nke etiti serotonin. A na-arụ ọrụ ụfọdụ n'ime mmezu nke ọrụ mmepụta ihe nke bromantane site na njirimara ihe nchebe ya na nke anụ ahụ. A na-emezi mmetụta nchebe nke bromantane mgbe eji ya na bemitil. Ọgwụ ọjọọ enweghi mmetụta ọ bụla na ndị nkatọ noradrenergic, ma ha ghọtara ihe ndị ahụ na-emegharị site na usoro dopaminergic. A na-atụ arokwa na a ga-enwe mmetụta nke etiti serotonin. A na-arụ ọrụ ụfọdụ n'ime mmezu nke ọrụ mmepụta ihe nke bromantane site na njirimara ihe nchebe ya na nke anụ ahụ. Ihe nchebe nke bromantane ntụ ntụ enwekwukwa ma ọ bụrụ na eji ya na bemitil
Ajụjụ 8 jụọ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ	7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Noopept